जो देशहरूमा संसारमा सबैभन्दा छिटो इन्टरनेट छ?
संसारभरि इन्टरनेट हाल सम्म उच्च गति मा फरक थिएन। त्यसैले, 15 वर्ष पहिले, पनि नेटवर्क जडान सबैभन्दा विकसित देशहरूमा धेरै ढिलो भएको थियो। यो अचाक्ली जानकारी विनिमय को गति सीमित। आज, कुरा परिवर्तन भयो। सबैभन्दा उच्च गतिको इन्टरनेट कोरिया र जापान पाउन सकिन्छ। जडान गति बाँकी अगाडी पछिल्लो।
संसारमा सबैभन्दा छिटो इन्टरनेट जापान यति लामो पहिले छैन देखियो। उहाँले ज्ञात इन्टरनेट प्रदायक त्यसैले-नेट मनोरञ्जन, सोनी समूह भित्र चलिरहेको थियो। यो नयाँ नेटवर्क Nuro भनिन्छ। यो एक विशेष दर द्वारा प्रतिष्ठित छ। Nuro को दिल मा फाइबर-ओप्टिक प्रविधि राख्नु। क्षणमा, डाउनलोड प्रति सेकेन्ड2gigabits सम्म गति। यस मामला मा, डाउनलोड गति प्रति सेकेन्ड 1 गिगाबिट सम्म जान्छ। यो जानकारी सोनी को अधिकारीहरु प्रदान गरिएको थियो।
हालसम्म, संसारमा सबैभन्दा छिटो इन्टरनेट मात्र अर्को छ प्रान्त टोक्यो बस्ने ती, र प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। बाहेक मासिक शुल्क यो रूपमा उच्च छ। यो प्रति महिना $ 51 छ। तर केही अवस्था छन्। तसर्थ, प्रदायक संग सम्झौता अनिवार्य छ। जडान लागि एक समयमा 535 डलर चार्ज गरिनेछ। संसारमा सबैभन्दा छिटो इन्टरनेट लागि सम्झौता दुई वर्ष छ।
यस्तै प्रविधी संयुक्त राज्य अमेरिका (कन्सास सिटी र टेक्सास) मा मान्य छ। यो Google फाइबर भनिन्छ गर्नुपर्छ। जापान संग तुलना, त्यहाँ मासिक शुल्क दुई पटक उच्च छ, र दुई पटक डाउनलोड गति कम छ। साथै, Google फाइबर अझै पनि मात्र प्रयोगात्मक मोडमा काम गरिरहेको छ। कन्सास सिटी एक आधार रूपमा चुनिएको छ। शहर भित्र, 600 हजार मानिसहरूको जनसंख्या संग, फाइबर-ओप्टिक नेटवर्क को नवीनतम पुस्ता सिर्जना गरियो। प्रस्ताव मूल्य - $ 120 प्रति महिना। यो प्रति सेकेन्ड 1 गिगाबिट एक गति मा मात्र होइन, असीमित इन्टरनेट, तर समावेश ट्याब्लेट नेक्सस 7, फाइबर-TV सँग। तर इन्टरनेट टिभी इन्कार अनुमति सस्ता विकल्प छन्। Nuro तुलनामा Google फाइबर खर्च हुनेछ थप जसरी।
नाटकीय इन्टरनेटमा पहुँच को गति परिवर्तन गर्न डिजाइन गरिएको छ कि एक नयाँ प्रविधी मा, बेलायत बाट वैज्ञानिकहरूले काम। तिनीहरूले ब्याङ्गर विश्वविद्यालय नयाँ प्रविधिहरू विकसित गर्दै छन्। तिनीहरूले नयाँ विकासक्रम र प्रविधिहरू धन्यवाद साधारण प्रयोगकर्ताहरूको लागि प्रति सेकेन्डमा 20 gigabits को इन्टरनेट पहुँच को गति परिवर्तन गर्ने योजना बनाउनु। र यसको बारेमा 2000 पटक आज भन्दा छिटो छ।
रूस गति मा तेज इन्टरनेट अझै पनि उन्नत उच्च प्रविधिहरू संग देशहरूमा पछि lags। तर यो हाम्रो देश को बासिन्दाहरू एक उच्च गति जडान संग वर्ल्ड वाइड वेब को expanses मार्फत हिंड्न सक्षम हुने सम्भावित छ। पहिले नै यो लागि आवश्यकताहरू। उदाहरणका लागि, चेल्याबिन्स्क मा बिटा मा प्रति सेकेन्ड 1 गिगाबिट इन्टरनेट गति प्रदान गर्दछ नयाँ प्रविधि शुरू।
जापान लागि जाँदा, दुर्भाग्यवश, संसारमा सबैभन्दा छिटो इन्टरनेट प्रयोगकर्ता कुनै पनि र सबै व्यक्तिगत कम्प्युटर पहुँच हुने छैन। तथ्यलाई कि सुसज्जित प्रति सेकेन्ड 1 गिगाबिट को डाउनलोड गति सीमित गर्ने निर्मित नेटवर्क कार्ड, संग पीसी को बहुमत। त्यसैले, नयाँ नेटवर्क मात्र कम्प्युटर विशेष उपकरण स्थापित जहाँ कम्पनीहरु उपलब्ध हुनेछ। नयाँ प्रविधिको विकास अझै पनि खडा गर्दैन, र निकट भविष्यमा उच्च गति इन्टरनेट पहुँच भन्दा प्रयोगकर्ताहरूलाई उपलब्ध हुनेछ।
तीन सरल समाधान: कसरी कम्प्युटर स्क्रिनमा फोन ल्याउन
1000 वा 1024? कति प्रति गिगाबाइट मेगाबाइट?
फोन नम्बर एक व्यक्ति कसरी पाउन? यो सम्भव छ?
सूचना विषय - यो ... कम्प्युटर विज्ञान को अवधारणा
इन्टरनेट सम्भावनाहरू अनन्त छन्!
कसरी किश्ती र अन्य चरा आकर्षित गर्न
सस्ता रूपमा थाईल्याण्ड प्राप्त गर्न? मास्को-बैंकक: दूरी
कसरी कानुनी रूपमा पनि "VKontakte" समूहमा सदस्यहरू थप्न
तयारी गर्दा "केानानो" (ट्याबलेटहरू), निर्देशनहरू, सिफारिसहरू
इन्टरनेटमा वास्तविक पैसा
सिकारुहरूको लागि शक्ति योग: एक वर्णन, अभ्यास र सिफारिसहरू एक सेट
कसरी "यूराल" बाट तपाईंको आफ्नै ट्रयाक्टर बाइक बनाउन
Psychovegetative सिंड्रोम: कारण, लक्षण, निदान र उपचार सुविधा
विशेष भण्डारण प्रकार। नागरिक व्यवस्था